डा. अजय रिसाल - कान्तिपुर समाचार
कुदाकुदमै बित्ने भो चैत
‘ओ हो ! त्यहाँ पनि भएन । अब के गर्ने होला ?’ ‘त्यो स्कुल त राम्रै छैन रे ! सबै नेपाली भाषामा मात्र । इंग्लिस सिक्ने इन्भारमेन्ट नै छैन ।’ ‘ओहो, कस्तो महँगो त्यहाँ त ! तर के गर्नु, आफू नखाएरै ’नि बच्चालाई राम्रो गराउनैपर्‍यो !’ ‘फ्युचर स्कोप राम्रो भएको स्कुलमा पढाउन त बच्चा मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, आमाबाबु पनि इन्टरभ्युमा पास हुनुपर्ने रे ! पैसै तिरेर पढाउन पनि कति गाह्रो !’
‘डाक्टर सा’ब, मलाई निद्रा लाग्ने औषधि चाहिं नदिनुस् है  ! बरु काउन्सेलिङ मात्र गर्नुस् । तपाईंले जति चोटि बोलाए पनि आउँछु ।’‘औषधि त के नै हुन्छ र यस्तो रोगको ? डाक्टरहरूले त खालि निद्रा लाग्ने औषधि दिएर बिरामीहरूलाई लठ्याउने मात्र न हुन् !’‘त्यो निद्रा लाग्ने औषधि धेरै खानु हुँदैन है  ! त्यसले बानी लगाउँछ, पछि छुटाउनै सकिन्न !’
निको हुन्छन् मानसिक रोगी
‘यस्ता यस्ता मान्छे पनि पुरै निको हुन्छन् र डाक्टरसाब ?’ बाटोमा आफ्नै सुरमा हाँस्दै हिंँडिरहेका एक अधबैंसे मनोरोगीलाई इंगित गर्दै मसँगै यात्रा गरिरहेका चालकले मसँग भने । बटाभरि मनमा कुरा खेलिरहे । कस्तो समाज हाम्रो ? जस्तोसुकै दीर्घ शारीरिक रोगका बिरामीलाई उपचार गराउन जहाँ पनि लान हिच्किचाहट हुँदैन ।
तर्क जेसुकै गरिए पनि अन्यत्रको तुलनामा हाम्रो देशमा सार्वजनिक बिदा कमै छ । तलबी बिदाको अवधारणा नेपालको सबै क्षेत्रमा आइसकेकै छैन । बैंक अनि केही वित्तीय संस्थामा भने १२–१४ दिन ‘फोर्स्ड लिभ’ को चलन छ, जसले केही मात्रामा भए पनि कर्मचारीको तनाव व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य लोकलज्जा होइन
१५–२४ वर्षको उमेर किशोर एवं युवावस्था हो । यो उमेर उच्च माध्यमिक स्तरमा पुग्ने समय हो । स्कुल परिवर्तन, विषय छनोट, घरको दायित्व, पेसागत चुनौती, साथी–संगतीमा बढोत्तरी एवं समूह–निर्माण अनि विपरीत लिंगीप्रतिको आकर्षण– प्रेम सम्बन्ध आदि सुरुवात यही समयमा हुन्छ ।
डा. अजय रिसालका लेखहरु :
प्रतिभा पलायन कि निर्यात ?
‘सर, म त म्याच भएँ नि । मेडिसिनमा पाएँ,’ एउटी आशालाग्दी विद्यार्थीले अमेरिकामा ‘रेसिडेन्सी’ अर्थात् ‘एमडी’ गर्ने अवसर पाएको गर्वसाथ सुनाइन् । आफ्नो छात्राले राम्रो अवसर पाएको अनि ‘रिकमेन्डेसन’ सफल भएकोमा एक मन खुसी भयो । तर अर्को मन दु:खी भयो, ‘एक होनहार चिकित्सकले नेपाल छाड्ने भइन् भनेर ।’
हिंसाको मनोसामाजिक विमर्श
‘सामूहिक बलात्कारपछि हत्या’ । ‘प्रेमीद्वारा प्रेमिकाको बलात्कार अनि हत्या’ । ‘रक्सीको झोंकमा श्रीमतीमाथि छुरा प्रहार’ । ‘दाइजो नल्याएकामा ज्युँदै जलाइइन्’ । मनै सिरिङ्ङ पार्छन् यस्ता समाचार शीर्षकले । किन हुन्छन् यस्ता घटना ?
लागूपदार्थ सेवन : युवाको दुस्मन
लागूपदार्थ दुर्व्यसनरूपी रोगले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने युवालाई नै हो । नेपालमै एक दशक अगाडि गरिएको एउटा सर्भेक्षणले लागूपदार्थको सेवनको सुरुवात गर्ने औसत उमेर २३.८ वर्ष भनी देखाइएको छ ।
बढ्दो हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य
शान्ति र अहिंसाको मार्गनिर्देशक भएका कारण बुद्ध, गान्धी, मन्डेला, मार्टिन लुथर किङ, मदर टेरेसा विश्वभरि नै पूजित छन्, वन्दित छन् । तर पनि किन हिंसा बढिरहेछ हाम्रो समाजमा ? किन सर्वस्वीकार्य शान्ति र अहिंसा कायम रहन सकेको छैन यो विश्वमा ?
जेष्ठ २६, २०७४